दीपिका र रणवीर घडेरी किनेर चर्चामा ! - Aarthiknews
दीपिका र रणवीर घडेरी किनेर चर्चामा !
एजेन्सी। दीपिका पादुकोण र रणवीर सिंह हालै मुम्बई नजिकै अलीबागमा घडेरी किनेर किनेर चर्चामा आएका छन्। मिडिया रिपोर्टका अनुसार उनीहरू दुवैले छुट्टी घर बनाउनको लागी एउटा जग्गा किनेका छन्। जसको लागी दुबै जना कागजी कामको लागी अलीबागको रजिस्ट्रार कार्यालयमा गएका थिए। हालै यसबारे केही थप जानकारी बाहिर आएको छ।
यदि मिडिया रिपोर्टहरुमा विश्वास गर्ने हो भने रणवीर-दीपिकाले यस सम्पत्तिको लागी २२ करोड भारतीय रुपैयाँ तिरेका छन्। यस बाहेक, दुवैले १ करोड ३२ लाख रुपैयाँ सम्पत्तिको टोकन शुल्कको रूपमा तिरेका छन्। यो सम्पत्ति मापागाउँमा स्थित छ। अलीबाग नजिक यो ९ हजार वर्ग मिटरमा फैलिएको छ। दीपिका र रणवीरले यो सम्पत्ति आफ्नो फर्म आरएस वर्ल्डवाइड एन्टरटेनमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड र केए इन्टरप्राइजेज एलएलपी अन्तर्गत किनेका छन्।
मिडिया रिपोर्टका अनुसार गत महिनाको सुरुमा दीपिकाले बेंगलुरुमा एक विशाल सेवा अपार्टमेन्ट किनेकी थिइन्। यो सम्पत्ति हाल उनको गृह सहरमा निर्माणाधीन छ, जुन करोडौँ मूल्यको रहेको छ।
सन् २०१४ मा दीपिका बेहुमुन्डे भवनको ३०औँ तलामा अर्को फ्ल्याट किनेकी थिइन् । जम्मा २३१९ वर्गफुटमा बनेको यो फ्ल्याटको लागत २३ करोड ७५ लाख थियो। विशेष कुरा यो हो कि दीपिका आफैँ यो ३३ तलाको भवनको २६औँ तलामा बस्छिन्।
दीपिका पादुकोणले पद्मावत रिलिज हुनुभन्दा पहिले लन्डनको एक क्षेत्रमा अर्थात् भारत बाहिर एक घर किनेकी थिइन्। यस भन्दा पहिले उनले रणवीर सिंहसँग गोवामा एक बङ्गला किनेकी छिन्। दीपिका पादुकोण पनि मुम्बईमा आफ्नो घर किन्नु अघि पाली हिल घरमा बस्थिन्।